I-Sekela Mongameli lika-Apple lokwahluka kunye nokuBandakanywa liza kuhla ekupheleni konyaka | Ndisuka mac
Isikhundla esitsha esathathwa nguDenise Young Smith, owathi kwiinyanga ezintandathu waba usekela-mongameli we-Apple ngokwahluka kunye nokubandakanywa, ube lixesha elifutshane, emva kokuba Iminyaka emi-3 edlulileyo esebenza njenge-Apple Vice-President we-Worldwide Human Resources, isikhundla aweza kuso emva kokuba esebenze kwizikhundla ezifanayo kwezinye iinkampani.
Ngaphambi kokuba aqale ukugxila ngokukodwa kwindima yakhe entsha, uDenise wayesele eqalile ukubandakanyeka kukwahlukahlukana kwabasebenzi. Isithethi senkampani sikuqinisekisile oko UDenise Young ukushiya inkampani iinyanga ezi-7 emva kokutshintsha izikhundla ngaphakathi kwinkampani.
Usomlomo wale nkampani ubhengeze ukumka kukaDenis Young kwaApple, ubhengeze umntu oza kungena endaweni yakhe. UChristie Smith, ibinguye umntu oza kuphatha obu sekeli mongameli. UChristie usebenze kule minyaka ili-17 idlulileyo eDeloitte kwizikhundla ezahlukeneyo zokuhambelana nenkampani kwaye uya kunika ingxelo ngqo kuTim Cook. Ingxelo ehambelana nekota yokugqibela yonyaka kwicandelo lokwahluka kunye nokubandakanywa iya kwenziwa ngu-Sekela Mongameli Wezabasebenzi u-Deirdre O'Brien.
Xa uDenise ethatha isikhundla esitsha eApple, ngaphambili Ndakhe ndathetha noTim Cook malunga nokushiya inkampaniKodwa uCook ukwazile ukumenza axhome de bafumane indawo eyonelisayo endaweni yenkampani, ngokutsho kweTechCrunch, ke impikiswano eyakhokelela kuhambo lwakhe oluya eColombia, apho wayethathe inxaxheba kwinkomfa malunga neyantlukwano kwaye apho kwakubi utolike ezinye zeengcaciso-ntetho zakhe, khange kube sisizathu solu tshintsho kwicala leli sebe.
Ndiziva ndikhathazekile xa iyantlukwano okanye igama elithi iyantlukwano libhalwe abantu ngombala, abasetyhini, okanye uluntu lwe-LGBT. Kunokubakho iibhentshi ezili-12 ezimhlophe ezinamehlo aluhlaza egumbini, aba bantu banokubandakanywa kolu luhlu njengoko beza kunika amava obomi obahlukileyo.
Kungekudala emva kokungena kwimpikiswano, uDenise wathi amazwi akhe khange bamele umgaqo-nkqubo wokwahluka kwe-Apple.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Iphini likamongameli we-Apple lokwahluka kunye nokubandakanywa kuya kwehla ekupheleni konyaka
Le bhokisi yezothutho enokubandakanya iApple kwiApple Watch yayo